Corporate News – AYA Bank
Posted on May 14, 2021 May 14, 2021 by Pyae Kyaw
AYA Bank's 4th Board of Directors' Meeting was held today on 14th of May 2021. At the meeting, AYA Bank's Founder and Chairman U Zaw Zaw gave an opening remark by congratulating Daw Khin Saw Oo, Executive Chairman of AYA Bank on her being appointed as Chairman of the Myanmar Banks Association during it's[…]
Posted on May 11, 2021 May 14, 2021 by Pyae Kyaw
AYA Bank ရန်ကုန် မြို့ရှိ ဘဏ်ခွဲများတွင် 1. Debit Card နှင့် သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ 2. ဘဏ်ကတ် အသစ်လျှောက်ထားခြင်း နှင့် ကတ် error ဖြစ်ခြင်း 3. AYA Mobile Banking / AYA Internet Banking အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း (သို့) လော့ကျခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ထပ်မံရရှိနိုင်သော ဘဏ်ခွဲစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချယုံကြည် ဧရာဝတီ ” Your Trusted Partner ”
Posted on May 2, 2021 May 3, 2021 by Pyae Kyaw
ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေထုတ်ယူခြင်း ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ရာ၌ ၂၀၂၁ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) မှ စတင်၍ 01 470 5555 သို့ ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည့် ဘဏ်ခွဲ၊ နေ့ရက်၊ အချိန်တို့ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Step 1 ငွေထုတ်လိုသူမှ ဘဏ်၏ ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ် 01 470 5555 သို့ ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုပါ။ Step2ဖုန်းဆက်သွယ်စဉ် ငွေထုတ်လိုသူ၏ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်မည့်ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ဘဏ်မှ တောင်းခံကာ မှတ်တမ်းယူထားပါမည်။ Step3ဘဏ်မှ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည့်နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်ဘဏ်ခွဲတို့ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးပြီး မှတ်တမ်းအဖြစ် SMS ပေးပို့ပါမည်။ […]
Posted on September 24, 2020 September 25, 2020 by Pyae Kyaw
ဧရာဝတီစင်တာအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာ (၂၄)နာရီအချိန်အတွင်း စိတ်ပါဝင်စားစွာ လျှောက်ထားသူ (၁၅၀၀)ကျော်အထိ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဧရာဝတီစင်တာ (A) အဆင်ပြေစွာ လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၁၅၀)ကျော်က နေ့မအား ညမနား ကြိုးပမ်းတာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြပြီး ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားမည့် စင်တာ (B) နှင့် (C) တို့အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်နှင့် အလှည့်ကျတာဝန် လွှဲပြောင်းနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ပမှ စိတ်ပါဝင်စားသူများကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားကြသူများတွင် ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ အစရှိသည့် လူငယ်လူလတ်ပိုင်းများ ပါဝင်ပြီး အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တစ်ဦးချင်း ဆွေးနွေး၍ စိစစ်ရွေးချယ်ဖိတ်ခေါ်ကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆင့်ပွား အသိပညာများ ပို့ချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။[…]
၂၀၂ဝပြည့်နှစ်အတွက် Asiamoney မှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သော Best Bank for SMEs Award ကို AYA Bank မှ ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိကြောင်း ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
Posted on May 5, 2020 May 15, 2020 by Pyae Kyaw
၂၀၂ဝပြည့်နှစ်အတွက် Asiamoney မှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သော Best Bank for SMEs Award ကို AYA Bank မှ ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိကြောင်း ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။ AYA Bank သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နည်းပညာတိုးတက်မှုအရှိဆုံးဘဏ်အဖြစ် အချိန်တိုအတွင်း ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သလို ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးကို အဖက်ဖက်မှ ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိသောကြောင့် SMEs လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးသော အကောင်းဆုံးဘဏ်အဖြစ် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဆက်လက်ပြီး AYA Bank အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ SMEs ကဏ္ဍမျိုးစုံကိုလည်း တိုးချဲ့ပြီး အလားအလာရှိမည့်လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ချေးငွေများ ထောက်ပံ့ခြင်းများကို အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဧရာ၀တီဘဏ် Non Clerical Staff ဝန်ထမ်းများအား ဆန်နှင့်ဆီများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်တဲ့ မေတ္တာဖြင့်မျှဝေခြင်း အစီအစဉ်
Posted on April 8, 2020 February 2, 2022 by Pyae Kyaw
ဧရာဝတီဘဏ်သည် လတ်တလောပူးပေါင်းကာကွယ်တိုက်ဖျက်လျက်ရှိသော Covid19 ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း ရုံးချုပ်နှင့်ဘဏ်ခွဲအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် Non Clerical Staff ဝန်ထမ်း (၂,၂၀၀) ကျော်အတွက် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဆန်တစ်တင်းခွဲအိတ်နှင့် ဆီတစ်ပိဿာအား တစ်ဦးချင်းစီသို့ မေတ္တာဖြင့်မျှဝေခြင်း အစီအစဉ်အဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဧရာဝတီဘဏ်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊အကြီးတန်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဝင်များ၊ဌာနကြီးမှူးများ၊တိုင်းဒေသ ကြီးတာဝန်ခံများအားလုံးမှ ၎င်းတို့၏ လစာမှ အချိုးကျရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြသည့် ငွေကျပ် သိန်း (၇၅၀)ကျော်ဖြင့် ဆန်နှင့်ဆီများ မေတ္တာဖြင့်မျှဝေခြင်း အစီအစဉ်ကြောင့် Non Clerical Staff ဝန်ထမ်းများ၏ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစွာဖြင့် ယခုလို ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အတူတကွ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ရပ်တည်ဖြတ်သန်းနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှ COVID-19 ကြောင့်လိုအပ်သည့်နေရာဒေသများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်[…]